5 ပဲရစ်ကနေရထားဖြင့်ခရီးသွားနိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ပဲရစ်ကနေရထားဖြင့်ခရီးသွားနိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း
စာဖတ်ချိန်: 8 မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 30/10/2020)
ရက်အနည်းငယ်ကွာလာပြီစဉ်းစား? စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်အရာကို ပဲရစ်ကနေရထားနဲ့ခရီးသွားအချို့တစ်နေ့တာခရီးစဉ်? ပြင်သစ် ရထားတစ်ဦးအစာရှောင်ကြသည်, လွယ်ကူသော, နှင့် Eco-friendly လမ်း ပြင်သစ်မှာလှည့်ပတ်ပါ. နှင့် တစ်ဦးကရထား Save, သငျသညျအဘယ်သူမျှမကဆက်ပြောသည်အခကြေးငွေနှင့်အတူမိနစ်စာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်, လွန်း! နိုင်ပြီ!
ပဲရစ်ပြင်သစ်နှင့်မှကျေးဇူးတင်စကားရှိသမျှနှင့်အတူအလွန်ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါသည် TGV ရထား (တစ်ဦး Grande Vitesse လေ့ကျင့်) အဆိုပါအချို့5ကနေအကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ် ပဲရစ် အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှများမှာ4နာရီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း! ဒီနေရာမှာပဲရစ်ကိုသွားတဲ့အခါသင်စဉ်းစားသင့်တဲ့ခရီးစဉ်တွေအကြောင်းငါတို့သုတေသနပြုထားတယ်.
1. ရထား Marseille ဖြင့်ခရီးသွားနိုင်ရန်ခရီးများထွက်ခြင်း (Provence-Alpes-Cote d'Azur)
သငျသညျပဲရစ်ကနေနေသာထွက်ပြေးဖို့ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, မာဆေးကိုသွားရာအရပ်ဖြစ်ပါသည်. ပိုကောင်းသော်လည်းအစာရှောင်ခြင်းပြုမူ, အဆိုပါ နေသာရက်ပေါင်းမကြာမီအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့လာမယ့်ပါလိမ့်မည်. မာဆေးမြေပုံပေါ်တွင်ဝေးကြည့်ပေမယ့်မာဆေးမှပဲရစ်သာဖြစ်ပါသည် 3.5 အဆိုပါ TGV နှင့်အတူရထားနာရီ. မာဆေး, တွင် Provence-Alpes-Cote d'Azur ဒေသ, ပြင်သစ် Riviera ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. လူအတော်များများ Corsica ကျွန်းမှ၎င်းတို့၏လမ်းအပေါ်လျင်မြန်စွာမာဆေးသွားရောက်ကြည့်ရှုသော်လည်းမြို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်စူးစမ်းဖို့အေးမြသောနေရာတွင်ဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါ ရာသီဥတု မာဆေးသည်ကြီးမြတ်ပေါင်းမွို့၌မြင်လုပ်ဖို့အမှုအရာအများကြီးရှိပါသည်. ဗဟိုမာဆေးမြို့မြင်ကွင်းများအများစု concentrates, ထိုကဲ့သို့သောပုံအဟောငျးဆိပ်ကမ်းအဖြစ်. Marseille ရဲ့အကြီးအကျယ် rectangular port အတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့သ 2,600 နှစ်နှင့်တစ်ခုတည်းမျက်မှောက်ထက်တစ်ခုလုံးခရိုင်ပို.
သုံးနှစ်ဖက်တွင်ကျယ်ပြန့် Promenade နှင့်အတူစီးတံတားအများအားဖြင့် 18 ရာစုဟောင်းတဦးဂိုဒေါင်များပူးတွဲနေကြတယ်.
နီးပါးအသီးအသီးကဤတစ်ရှိပါတယ်တူသောဒါဟာပုံရသည် ကဖီး, ငါး စားသောက်ဆိုင်, သို့မဟုတ်ယင်း၏မြေညီထပ် on bar, သငျသညျမွငျနိုငျဒီတော့သင်တစ်ဦး pastis ကိုနို့အဖြစ်ပြင်ပတွင်ထိုင်ခုံနှင့်အတူဤဝိဇ္ဇာအတတ်အားမွို့၌အသက်တာကိုဆက်ရေး.
အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းရှည်ဖို့ဆိပ်ကမ်းဆီခေတ်မီဆိပ်ကမ်းဆီပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် မွောကျ, နှင့်အဟောင်းဆိပ်ကမ်းကိုအတွက်စက်လှေအများစုအပျော်အပါးအဘို့ဖြစ်ကြ၏.
သို့သော်နားမှာစီးတံတား des Belges မှာ, နောက်ဆုံးပေါ်ဖမ်းနေတုန်းပဲမနက်တိုင်းရေအားဖြင့်ငါးဈေးကွက်မှာရောင်းချခဲ့ခံရဖို့ကမ်းခြေကိုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
ဟောငျးဆိပ်ကမ်း၏တောင်ဘက်ဖို့ skyline အထက်မြင့်တက်ဒီအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးလက်လွတ်ရန်ခက်ခဲဒါဟာင်.
ဒါဟာ 19 ရာစု Neo-ဘိုင်ဇင်တိုင်းရဲ့ ဘုရားရှိခိုးကြောငျး 150 ရေကိုအထက်မီတာ, မာဆေးရေကြောင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်စောင့်ကြည့်ဖို့က၎င်း၏မျှော်စင်ရဲ့ထိပ်မှာအပျိုစင်နှင့်ကလေးတစ်ဦးကြီးများရွှေရုပ်တုနှင့်အတူ.
ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, La Garde အပေါ်ဘာသာရေးသည်များနှင့်မျှော်စင်ရှိပါတယ်ခဲ့, နှင့် basilica ကိုလည်း Chapel ပါဝင်သည်တဲ့ခေတ်ဆန်းခံတပ်၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်ထည့်သွင်း.
အဆိုပါတောင်တက်ထဲမှာပေါ့ပေါ့ယူခံရဖို့မဟုတျပါဘူး နွေရာသီ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးရှိပါတယ် ခရီးသွားဧည့်ရထား ဟောငျးဆိပ်ကမ်းကနေမှန်မှန်ထွက်ခွာ.
ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, အဆိုပါ တောတောင်ရှုခင်း ဤနေရာတွင်တက်ကနေမေးရိုး-ကျဆင်းနေဖြစ်ပါသည်.
မာဆေးမှာတည်ရှိပါတယ် 773 တောင်ဘက်ပဲရစ်၏ကီလိုမီတာ. မာဆေးမှပဲရစ်ရထားသွားလာ trips အလွန်လွယ်ကူသည်. မာဆေးမှတိုက်ရိုက်ရထားပဲရစ်တစ်လမ်းခရီးဘို့ပဲရစ် Gare de Lyon စွန့်ခွာ 3.5 နာရီ. သငျသညျမာဆေးအပေါ်ခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင် နွေရာသီတနင်္ဂနွေ ကျနော်တို့အကြံပြု ရထားလက်မှတ်တွေ booking ကြိုတင်မဲအတွက်ကောင်းစွာ.
Clermont Ferrand ရထားမှမာဆေး
2. ROUEN လည် (နော်မန်)
မြစ်အားဖြင့်တည်ရှိပြီး သူ၏, Rouen သည်ပဲရစ်နှင့်နီးကပ်သောနေ့ရက်ဖြစ်ပြီးနော်မန်ဒီ၏အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်ဖြစ်သည်. ၏ "မြို့ချစ်စနိုး 100 ခေါင်းလောင်းတာဝါတိုင်”. Rouen တစ်ဦးရှိပါတယ် ကြွယ်ဝသောသမိုင်း, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြတိုက်, နှင့်ကောင်းမွန်သော gastronomy.
Rouen ၏တစျခုဖွစျသညျ အလှဆုံး တိုတောင်းသော5ပဲရစ်ကနေရထားနဲ့သွားဖို့အကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်. မြို့တော်ထဲကနေသူ့ရဲ့တိုတောင်းသောအကွာအဝေးကြောင့် (126 ကီလိုမီတာ), များစွာသောလူပဲရစ်ကနေနေ့ကခရီးစဉ်အပေါ် Rouen သွားရောက်ကြည့်ရှုသို့သော်ဤနာရီအနည်းငယ်ထက်ပိုမိုထိုက်တစ်မြို့ဖြစ်၏.
သငျသညျအခြို့သောရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်မြင်ချင်ရှိမရှိ, ၏ကိုလှိမ့်တောင်ကုန်းစူးစမ်းဖို့ရာမှတစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်းရှိ နော်မန်ဒေသ, သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာအခြို့သောနပေုံဖမ်းယူချင် (ကျွန်းသစ်-ရှုမြင်သုံးသပ်ကြမျက်နှာစာနှင့်အတူပြည့်စုံ), အဘယ်သူမျှမ Rouen မယုံနိုင်လောက်အောင်တော်တော်လေးကြောင်းရှိငြင်းပယ်ရဲ့!
သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး, တမြို့လုံးလည်းအလွရှိခြင်းများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားသည် အနုပညာမြင်ကွင်း, နေဆဲယနေ့တိုင်မှန်ထားတဲ့အရာတစ်ခုခုကို. 20 ရာစုအတွင်းမှာတော့, Claude Monet ၏အကြိုက်, အဖြစ်အခွားသူမြားစှာ, မြို့ကိုစွန့်နှင့်ပင်မြို့ဆေးထိုးခြင်းမှမှုတ်သွင်းခဲ့သည်.
ယခု, Rouen ရဲ့လမ်းများအများအပြားလမ်းသွားလမ်းလာရှိနေဆဲ, မြို့မှတဆင့်တစ်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်အမှန်တကယ်အချိန်ပြန်နင်းကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ခံစားရကြောင်းအဓိပ္ပာယ်. အဘယ်သူမျှမကားများ, cobbled လမ်းကြောင်း, တစ်ဆိပ်ကမ်းဧရိယာ, ပင်တစ်ရှေးဟောင်းခရိုင်: ချစ်ရမယ့်? ခရီးစဉ်ကိုဇွန်လ-စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာ Rouen နှင့်သင်တောင်မှအခါနေရောင်အစုံနှင့်မိုဃ်းမလင်းမှီအစုံအတွက်ဘုရားကျောင်းမှာမှာအခမဲ့အလင်းအိမ် display ကိုမှကုသပါလိမ့်မယ်.
ရထားဖွငျ့ Rouen မှပဲရစ်မြို့
Rouen တည်ရှိပါတယ် 126 ပဲရစ်ကနေကီလိုမီတာ. Rouen မှပဲရစ်ရထားသွားလာ trips အလွန်လွယ်ကူသည်. ပဲရစ် Rouen ခွင့်မှလေ့ ပဲရစ်စိန့် Lazare ရထားဘူတာ နာရီတိုင်း. အဆိုပါခရီး 1 နာရီကြာ 15 1 နာရီမှမိ 45 ငါ့ကို, ရထားပေါ်တွင်မူတည်.
ပဲရစ် Rouen ရထားမှ
ပဲရစ် Calais ရထားမှ
Calais ရထားမှ Rouen
3. Lyon လည် (Auvergne - Rhône Alpes)
လိုင်ယွန်, ပြင်သစ်တွင်တတိယအကြီးဆုံးမြို့တော်, ပြင်သစ်တွင်သွားရောက်ထိပ်မြို့ကြီးများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါမြို့အသက်တာ၏က၎င်း၏အရည်အသွေးကိုအတွက်လည်းလူသိများသည်, ခေတ်ပြိုင်မှရောမခေတ်ကနေအဆင်းလှသောရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ဗိသုကာအတတ်ပညာ, နှင့်ကောင်းမွန်သော gastronomy.
လိုင်ယွန်၏တစျခုဖွစျသညျ ပြင်သစ်တွင်အလှဆုံးမြို့များကို, နှင့်ကဲ့သို့သောခံစားရန်လှုပ်ရှားမှုများတစ်များပြားရှိပါတယ်. Fourbiere ဟေးလ် ကမ်းလှမ်းမှု လှပသောမြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ မြို့သူမြို့သားများနှင့်ကသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစတင်ရန်တို့သည်ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. Explore Vieux လိုင်ယွန်, မြို့တော်ရဲ့သမိုင်းဝင်စင်တာနှင့်၎င်း၏ရိုက်နှက်မှုနှလုံး, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်အတူ အလယ်ခေတ်နှင့်ခေတ်ဆန်း ဗိသုကာနှင့်တစ်ဦးကောင်းတဲ့လေထု. လိုင်ယွန်ရဲ့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားအစားအစာများ၏အရသာရတဲ့ပြီးနောက်, အဲဒါကိုဦးရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါကျွန်းဆွယ် (လိုင်ယွန်ရဲ့မြစ်-ခညျြနှောငျကျွန်းဆွယ်) ပိုပြီးလှပဗိသုကာနှင့်အချို့ ကောင်းတဲ့စျေးဝယ်.
လိုင်ယွန်တည်ရှိသည် 463 ပဲရစ်ကနေကီလိုမီတာ, ပဲရစ်ကဒီနေ့ခရီးစဉ်, ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့နှင့်ပါရီမြို့နှင့်အလွန်ကွာခြားသည်. လိုင်ယွန်မှပဲရစ်ရထားသွားလာ trips မြန်. ပဲရစ်လိုင်ယွန်ခွင့်မှလေ့ ပဲရစ် Gare de Lyon တစ်ဘို့အလုပ်ချိန်နာရီ ခရီးသွားခြင်း လှည့်ပတ်၏2နာရီ, ရထားပေါ်တွင်မူတည်.
4. La Rochelle လည် (အသစ်က Aquitaine)
La Rochelle နှင့်၎င်း၏ကျွန်းများအနာဂတ်ကိုဦးတည်ကျော်ကိုအနှစ်တထောင်ပတ်လုံးဟောင်းတစ်မြို့လှည့်နေကြပါတယ်! အတ္တလန္တိတ် seafront ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာအလတ်စား, မြို့သူမြို့သားတို့သည်ကြီးစွာသောစီးပွားရေးသို့၎င်း၏ရေကြောင်းအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်, ခရီးသွားလုပ်ငန်း, နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု, ၎င်း၏ထူးခြားသောအလှအပထိန်းသိမ်းနေစဉ်.
သငျသညျ, La Rochelle သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်?
ဟောငျးဆိပ်ကမ်းကနေ, တညားတာဝါတိုင်သာအရမ်းလေးစားမိပါတယ်နိုင်ပါတယ်, မြို့အုပ်ထိန်းသူများ. အတ္တလန္တိတ်ရင်ဆိုင်ခြင်း, သူတို့ကရာစုနှစ်များစွာကတဆင့်, La Rochelle ၏တန်ခိုးနှင့်စည်းစိမ်သည်မျက်မြင်င့်. ဤရွေ့ကားရေကြောင်းခံတပ်, အလယ်ခေတ်က built-in များနှင့်ယနေ့သမိုင်းဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးများအဖြစ်သတ်မှတ်, သငျသညျ, La Rochelle သွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါအထွက်မတ်တပ်ရပ်. ဆိပ်ကမ်းအဝင်ဝ၏အသီးအသီးအခြမ်းတွင်, အဆိုပါ Saint-က Nicolas မျှော်စင်, နှင့် Chain ၏မျှော်စင်နံရံတစ်ခုကချိတ်ဆက်. နောက်ဆုံး, အဆိုပါ Lantern များ၏မျှော်စင်ရှိပါတယ်, ယခင်ကတစ်ဦးမီးပြတိုက်နှင့်အကျဉ်းထောင်.
အဆိုပါ Ile က de Re သွားရောက်ကြည့်ရှု:
ကျွန်း၏တောင်ပိုင်းကမ်းခြေပေါ်မှာတည်ရှိ Bois-Plage-my-ပြန်အသက်အကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် ပင်လယ်ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်း ပြင်သစ်မှာ. သမုဒ္ဒရာထဲမှပွင့်လင်း, မြို့က၎င်း၏၏အရည်အသွေးဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည် ကမ်းခြေ. ဒါဟာအပြာရောင်အလံချီးမြှင့်ခဲ့သည် 2015 (စံပြပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်အမှတ်အသား). ၎င်း၏မှတဆင့်ရွာသို့သွားရောက် အကွေ့အကောက်များသောလမ်းကြားများနှင့်လမ်းများ, ပီတိမေလကနေစက်တင်ဘာလမှ hollyhocks နှင့်အတူစီတန်း.
ရထားဖွငျ့, La Rochelle မှပဲရစ်မြို့
La Rochelle မှာတည်ရှိပါတယ် 469 ပဲရစ်ကနေကီလိုမီတာ. ရထားသွားလာပဲရစ်, La Rochelle မှခရီးစဉ်များလွယ်ကူသည်. တိုက်ရိုက် TGV ပဲရစ် Gare de Montparnasse ကနေစွန့်ခွာခြင်းနှင့်သာရှိ La Rochelle မှပဲရစ်သို့လင့်ထားသည် La Rochelle ဖို့လေ့3နာရီ.
La Rochelle Nantes ရထားမှ
Toulouse, La Rochelle မှရထား
ဘော်ဒိုး, La Rochelle မှရထား
ပဲရစ်, La Rochelle မှရထား
5. ရထား DEAUVILLE ဖြင့်ခရီးသွားနိုင်ရန်ခရီးများထွက်ခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှု (နော်မန်)
Deauville အဆိုပါနော်မန်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တွေ့နိုင်သည်, Trouville နှင့်တောင်ဘက်-အနောက်ဘက်ကပ်လျက် Honfleur. ကို 'နော်မန် Riviera' 'Deauville ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပင်လယ်ဘက်မြို့ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအကြီးကမ်းခြေရှိပါတယ်, ကြီးစွာသောတိုက်ဆောင်, ကြီးမြတ်ဆိုင်များ, ကာနှစ်စဉ် ရုပ်ရှင် ပွဲတော်. ၎င်း၏ကျော်ကြားပြိုင်ပွဲ-လမ်းကြောင်းဖော်ပြခြင်းမ, ဂေါက်ကွင်းအပြင်လောင်းကစားရုံ. သင်ပိုမိုဘာကိုလိုချင်တာနိုင်?
Deauville သည်ပဲရစ်မှတစ်ရက်ခရီးစဉ်အတွက်အလွန်ကောင်းသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်သည်, နပိုလီယံ၏တတိယအစ်ကို၏ရူပါရုံအဖြစ်ဘဝကိုစတင်ခဲ့သည်. Trouville ၏ကပ်လျက်မြို့ကနေ, သူနားမှာနှင့်ခုံအနှံ့ကြည့်ရှုနှင့်တစ်ဦးအပြေးပြိုင်ပွဲ-လမ်းကြောင်းတည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်. ကြော့ Villas ပြိုင်ပွဲ-လမ်းကြောင်းနှင့်ပင်လယ်စပ်ကြား built ခဲ့ကြသည်နှင့်အ Deauville မွေးဖွားခဲ့သည်.
အစပိုင်းတွင် 19 ရာစုခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်သော်လည်း, ဒါကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဒုတိယလှိုင်း Deauville နေရာယူသော 20 ရာစုအစောပိုင်း၌ရှိ၏. ဤသည်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်ကျော်ကြား boardwalk ပါဝင်သည်, အဆိုပါခေတ်မီလောင်းကစားရုံ, နှင့်ခမ်းနားဟိုတယ်များ. အဆိုပါဟိုတယ်နော်မန်နှင့်တော်ဝင်ဟိုတယ်၌, နှင့်ဂေါက်ကွင်း.
ရထားဖွငျ့ Deauville မှပဲရစ်မြို့
Deauville တည်ရှိသည် 220 ပဲရစ်၏အနောက်ဘက်ကီလိုမီတာ. ရထားသွားလာပဲရစ် Deauville မှခရီးစဉ်များကယ့်ကိုလွယ်ကူပါတယ်. Deauville ခွင့်တိုက်ရိုက်ရထားပဲရစ် ပဲရစ်စိန့် Lazare အလုပ်ချိန်နာရီရထားဘူတာရုံနှင့်ရထားခရီးကြာရှည်ခံ2နာရီ.
ပဲရစ် Le Mans မှရထား
ပဲရစ် Rennes ရထားမှ
ပွောဆို ဟုတ်ကဲ့ (ပွငျသစျထဲတွင်ဟုတ်ကဲ့) ယင်းမှ5၏အကူအညီဖြင့်ရထားဖြင့်ခရီးသွားနိုင်ရန်ပဲရစ်မှအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများ တစ်ဦးကရထား Save! အဘယ်သူမျှမပို, ဝှက်ထားသောအဖိုးအခ, အဘယ်သူမျှမပျော့သွားတာကို. ရုံပျော်စရာ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ပဲရစ်ကနေရထားဖြင့်ခရီးသွားနိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-travel-train-paris%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / nl နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ru ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#နေခြည် #ပြင်သစ်ဟိုတယ်များ #ဆေးရုံ #အမြန်လမ်းမကြီး #ကွမ်းခြံကုန်း europetravel longtrainjourneys ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား